BBC Somali Oo Lixdan Jirsatay Maanta |
BBC Somali Oo Lixdan Jirsatay Maanta
Wixi intaasi ka dambeeyayna waxaa si weyn u kordhayay dhageystayaasha BBC Somali oo gaaray 3.6 milyan oo qof, kuwaasi oo kala socda BBC-da qeybaheeda kala duwan sida raadiyaha, onilenka iyo telefishinka.
Dabaaldega sanadguurada 60 aad ee BBC Somali ayaa waxaa lagu daahfurayaa abaal marintii ugu horeysay abid ee dhanka suugaanta ah oo loo qabto duamrka da’ada yar ee gabya.
Tartanka suugaanta ayaa waxaa uu u furnaa in ay ka qeybgalaan dhamaan gabdhaha da’doodu ay u dhaxeyso 16-ka ilaa 35-ka, iyada oo aan lagu xirin khibradooda iyo halka ay ku nool yihiin.
Soomaalida ayaa qani ku ah gabeyga, BBC Soomaalina waxa ay rejeynaysaa in abaalmarintan ay sare u qaadi doonto aqoonta jiilka cusub ee Somaliyeed iyo sidoo kale kobcinta gabdhaha da’da yare ee ku taxan dhageysiga BBC Somali.
Si loo xuso 60-guurada Laanta Afka Soomaaliga, waxaa la sii deyn doonaa barnaamijyo gaar ah oo bilaabanaya Jimcahan 14-ka Luulyo.
Xuskan waxaa lagu soo gebagebaynayaa munaasabad ku beegan maalinta 60-guurada ee 18-ka Luulyo lagu qabanayo magaalada Hargeysa oo lagaga dhawaaqayo qofka ku guulaystay abaalmarintii ugu horreysay ee abid BBC-du ku bixiso Gabyaa Haween Dhallinyaro ah. Dhegeystayaashu waxay maqli doonaan gabyaaga guulaysatay iyo sidoo kale barnaamijyo gaar ah oo munaasabadda ku saabsan.
Waxyaabaha ay BBC Somalisidoo kale idiin soo tebin doonto waxaa ka mid ah:
•Waraysiyo lala yeeshay weriyeyaal hore uga hadli jiray BBC Soomaali, dib u eegid sidii arrimuhu isu-beddeleen tan iyo markii Idaacadda la bilaabay.
•Sheekooyinka dhallinyaro Soomaaliyeed oo jecel warbaahinta bulshada ee gobollada Soomaalida oo dhan.
•Aragtida dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, oo ka mid ah xeryaha qaxootiga ee adduunka ugu ballaaran, iyo sida wararka Soomaalidu u gaaraan, una saameeyaan, gaar ahaan barnaamijka Baafinta.
•Qodobbo laga soo qaaday keydka wararka ee BBC Soomaali iyo dib u eegid dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee Idaacaddu ka warrantay.
•Dood toos ah oo lagu eegayo mustaqbalka BBC Soomaali, oo ay ka qayb gelayaan dad kala jooga Afrika iyo dalka UK.
•Eegitaan lagu sameynayo dhaqanka ummadda Soomaaliyeed iyo sidii uu isu-beddelay sannadihii la soo dhaafay.
Caroline Karobia, oo ah tifaftiraha xilka sii baneyneysa ee BBC Soomaali waxay sheegtay” Waxaan gaarnay 60 sano oo aad u wanaagsan ee warbaahineed waxaana aan sameynay horumar badan si aan ula saanqaadno dhegeystayaasheenna. Tani waa waqti farxadeed ee BBC Soomaali telefishinka dhowaan la furayna waxaan doonaynaa inaan ku xirnaanno dhegeystayaasheenna mustaqbalka.”